Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Taageerada Nolosha Maalinlaha ah ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka > Taageerada Nolosha Maalinlaha ah
Qalabka Taageerada Nolosha Maalinlaha ah, sida magacaba ka muuqata, ayaa inta badan ku habboon isticmaalka qoyska ee qalabka caafimaadka, wuu ka duwan yahay isticmaalka isbitaalka ee qalabka caafimaadka, qalliin fudud, cabbir yar, si sahlan loo qaadi karo ayaa ah sifooyinka ugu muhiimsan. Horaantii sannado badan ka hor, qoysas badan ayaa lagu qalabeeyay qalab caafimaad oo kala duwan oo fudud, sida heerkulbeegga, stethoscope, qalabka cadaadiska dhiigga, kaadida iyo qalabka daryeelka saxarada.
Qalabkan fudud ee nolol maalmeedka, ku habboon oo la taaban karo, gaar ahaan qoysaska qaar ee qaba cudurrada daba-dheeraada ayaa ah mid aad waxtar u leh, wakhti kasta si loo ilaaliyo xaaladda bukaanka, daaweyn caafimaad oo waqtigeeda ah. Sanadihii la soo dhaafay, oo ay weheliso kor u kaca heerarka nolosha, dadku waxay bixiyaan feejignaan dheeraad ah oo ku saabsan caafimaadka naftooda iyo qoysaskooda, qalabkii hore ee caafimaadka iyo qalabka, horeba ma qancin karaan baahida qoysaska qaarkood, dhammaan noocyada fudud oo wax ku ool ah. Qalab caafimaad oo guri oo cusub oo si buuxda u shaqaynaya ayaa sidoo kale soo baxa wakhtigan taariikhiga ah, qoys noqday, oo noqday lama huraan sahayda nolosha ee dadka. Horumarinta tignoolajiyada elektiroonigga ah, qalabyada caafimaadka guryaha ee tooska ah iyo kuwa toosan ee elektiroonigga ah, sida mitirka cadaadiska dhiigga ee elektiroonigga ah, tijaabiyaha sonkorta dhiigga, heerkulbeegga elektaroonigga ah, saxarada sariirta iyo qalabka daryeelka kaadida, ayaa suuqa yaalay.
Bacda biyaha kulul
Bacda biyaha kulul: Dhalada biyaha kulul macneheedu waa bac ay biyo kulul ku jiraan. Dhalada biyaha kulul ee casriga ah waxay isticmaashaa qalabka kuleyliyaha koronto si ay u kululeyso walxaha kulul ee gudaha iyada oo aan dhib loo helin buuxinta biyaha kulul. Sidaa darteed, dhalada biyaha kulul ee korontada ku shaqeeya iyo keega kulul ee korontada ayaa noqda mid aad u caan ah.
Qandhada Ilmaha ee Dheejada Jeelka Kahortagta
Xummada Ilmaha Xabagta Jeelka La-Dabayaa: Xabagta-daaweeyaha, oo leh saameyn-qaboojiso, waxay yareyn kartaa qabowga ay keento qandho, madax-xanuun iyo ilka-xanuun, qorraxda, muruqa muruqa ee ay keento xanuunka iyo calaamadaha kulaylka. , waxay yarayn kartaa qabowga ay keento qandho, madax-xanuun iyo ilig-xanuun, qorraxda, murqaha murqaha ee ay sababaan xanuunka iyo calaamadaha kulaylka.
Walxaha Daawooyinka Dhirta ee Shiineeska ah ee Daawada Kahortaga Dhiiga
Daawooyinka dhirta ee Shiineesku waxay ka kooban yihiin koollada caafimaadka ee antipyretic: Daawada antipyretic, oo leh saameyn qabow iyo qaboojin, waxay yareyn kartaa qabowga ay keento qandho, madax-xanuun iyo ilka-xanuun, qorraxda, muruqa muruqa ee ay keento xanuunka iyo calaamadaha kulaylka.
Daawooyinka dhirta ee Shiinaha maaddooyinka antipyretic paste caafimaadka: Waxay leedahay shaqada qaboojinta antipyretic, waxay yareyn kartaa qabowga ay keento qandho, madax-xanuun iyo ilig-xanuun, qorrax, muruqa muruqa ee ay keento xanuunka iyo calaamadaha kulaylka.
Daawada Antipyretic: Daawada antipyretic, oo leh saameyn antipyretic iyo qaboojin, waxay yareyn kartaa qabowga ay keento qandho, madax-xanuun iyo ilig-xanuun, qorraxda, murqaha murqaha ee ay keento xanuunka iyo calaamadaha kulaylka. qandho, madax-xanuun iyo ilig-xanuun, qorrax, muruq muruq oo ay sababaan xanuunka iyo calaamadaha kulaylka.
Shiineeska Transdermal-ka Daloola ee Maqaarka ah ee Patch Pain Relief Herbal Plaster
Shiinees Transdermal Porous Patch Patch Pain Relief Herbal Plaster: Transdermal patch waxaa loola jeedaa diyaargarow khafiif ah oo la marsiin karo maqaarka oo laga nuugo maqaarka si ay u soo saarto saameyn daweyn ah oo nidaamsan ama maxalli ah. saamaynta ugu horreysa ee gudubka, oo aan saameyn ku yeelan heerka faaruqinta gastric, bioavailability sare; Si fudud loo isticmaalo, xanuun la'aan, waa la joojin karaa ama la joojin karaa wakhti kasta; Qiyaasta saxda ah, aagga nuugista go'an iyo feejignaanta balasmaha oo xasilloon; Ma jiro rosin iyo dhejisyo kale, xanaaq yar oo maqaarka ah; Kordhi wakhtiga ficilka oo yaree Wakhtiga daawadu.
Patch Transdermal: balastar Transdermal waxaa loola jeedaa diyaargarow khafiif ah oo lagu dhejin karo maqaarka oo la nuugo maqaarka si loo soo saaro saameyn daweyn ah oo nidaamsan ama maxalli ah.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Taageerada Nolosha Maalinlaha ah oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Taageerada Nolosha Maalinlaha ah soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Taageerada Nolosha Maalinlaha ah la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.